Hevitra MPANOHARIANA | Jolay 2021
2021-07-27 @ 23:03 in Ankapobeny
Raha ny sitrapoko dia tsy ho nanoratra mihitsy momba ity "non événement" eto Madagasikara ity aho satria be loatra ny petatoko amin'ilay lazaiko sahady ho sarimihetsika mba hanetsehana ny fientanampon'ny olona tao anatin'ny herinandro nisasahan'ny fehim-potoana iasan'ny filoha ankehitriny. Sarimihetsika natao hanadinoana ireo zava-tsy mahomby hafa maro.
Vitany aloha ny nampanadino tanteraka ny raharaha volamena 73.5 kg tamin'ny fiandohan'ny taona. Vitany ny nanadinoana ihany koa ilay fihinanan'ny olona tany atsimo hoditr'omby ho fanadinoana ny hanoanany. Vitany ihany koa ny nanakona ny fiakaran'ny zavatra iainana andavanandro toy ny sakafo izay efa ho avo roa heny noho ny teo aloha. Lasa tsy toy ny maresaka ihany koa ny fiakaran'ny fitaovana sy ny kojakoja amin'ny fanorenan-trano. Tsy misy mahalala intsony ny kitoatoa tamin'ny fananganana "sekoly manara-penitra" tsy vita herintaona akory dia efa mitete rehefa avy ny orana, ny varavarankely dia tena kely tokoa tsy sahaza ny toetany tany amin'ny faritra nanorenana azy. Saika vitany hatramin'ny lahatsoratra bilaogy saika ho soratako sy ho avoakako kanjo nisy ity zava-tsy nisy ity tampoka. Hosoratako eto koa io zavatra saika adino io.
Tamin'ny voalohany, noheverina ho fakana an-keriny no nisy, hay fisamborana avy amin'ny manampahefana ho amin'izany. Nivoaka ny antony isamborana ireo olona roa: saika hamono ny filoha. Zavatra nisy nolazain'ny tao amin'ny Tambajotra Sosialy: Fa toa nipetraka akaiky ny filoha anie ny iray amin'ireo olona ireo tamin'ny 26 jona dia tsy nanao ilay "action" ve? Nosamborina ihany koa ny vadin'ireo olona voarohirohy ireo. Fihevitro adaladala: nisy nandray anjara mavitrika angamba ny vadin'ny sasany tamin'ireny taona 2009 ireny.
Niditra tamin'ny dingana manaraka, toa nisy mpitrandraka solika eto Madagasikara nandray anjara amin'izany fikonokononana hifofo ny ain'ny Filoha izany. Notondroina avy eo ny Madagascar Oil fa (anisan'ny) namatsy ilay tetika izay manana tetibola 5 tapitrisa dolara hanatontosana izany. Ny vola tratra tany amin'i Paul Rafanoharana toa atsasaky ny miliara ariary latsaka? Lazaina fa misy fitaovam-piadiana mahery vaika enti-miady tratra, efa fiadiana entina mihaza no napoitra ho hitan'ny mpijery. Tsoriko fa tsy nijery vaovao tamin'ny fahitalavitra mihitsy momba azy ity aho afa-tsy ilay antsafa nataon'i Patrick Rajoelina tao amin'ny TV5Monde.
Nilaza ho naharay mailaka avy amin'i Paul Rafanoharana tokoa ny Madagascar Oil voahoso-potaka satria misy mikendry ny tsenany ao, na voatohintohina ny tsenany amin'ny lafiny solika sy ny fifanarahana tamin'ny JIRAMA. Fa ilay mailaka fangatahana dia efatra andro taorian'ny nisamborana ilay voarohirohy no nalefa... izany hoe natao handetika ny mpandefa sy ny nandefasana izany. Nitsipaka tsy hanome vola ho amin'izany fifofoana ny ain'ny Filoha izany anefa ny Madagascar Oil... Tsy mbola nanome vola izy izany nefa ny nodradradradraina teo aloha toa...(avy amin'ny fanehoan-kevitra Tambajotra Sosialy no anarahako izany fa tsy vaovao fahitalavitra.)
Be ny nanao ho fihomehezana ny tantara ary anisany aho. Niova indray ny tantara androany (27 jolay). Nosamborina ny mpanentana sy Artista Sareraka, voalaza ihany koa fa nisy avy ao amin'ny GSIS (zandary niofana manokana amin'ny raharaha sarotra) nosamborina, Jeneraly roa ihany koa ka avy amin'ny zandary ny iray sady nolazaina fa efa Praiminisitra teo aloha. Dia lasa ny saiko hoe tsy ny Jeneraly Jean Ravelonarivo ve izany [Fa naninona no aty aoriana vao tononina ny anaran'i Victor Ramahatra? Lasa olonkafa no voatonona tsy fidiny, efa maro izany ny jeneraly manana laharam-boninahitra jeneraly an]sa tsy azo soratana moa ny anarany? Izy aloha no Jeneraly zandary sady efa praiminisitra fantatro fa tsy hihevitra aho hoe ny Jly Rakotoarijaona Désiré no mbola hiditra amin'izany politika izany.
Talohan'ity toe-javatra ity koa anefa efa nisy ireo lazaina ho mpiambina ny Filoha teo Aloha Hery Rajaonarimampianina voasambotra fa hoe nikonokonona hamono ny Jly Richard Ravalomanana sy minisitra hafa. Ny Praiminisitra teo aloha Ravelonarivo ihany koa eto Praiminisitra tamin'ny andron'ity filoha teo aloha ity.
Dia nahazo fampitandremana mafy ihany koa ny tao amin'ny tafika sao dia misy miadaladala ny hikomy eo.
Efa mihabetsaka no resy lahatra fa adin'ny samy... niara-nitolona tamin'ny 2009... ihany ity eto ity ary adin'ny samy mpanana noho ny politika sy fifandraisana akaiky tamin'ny mpitondra politika. Be ihany koa ny leo tanteraka amin'ity raharaha ity satria maharikoriko ny mihevitra azy sady maharikoriko ilay manavendrana ny vahoaka ao anatin'izany sy ny fanasana atidoha momba ity raharaha ity.
FA INONA ILAY RAHARAHA HAFA TAKONA VAO NISY ITY TOEJAVATRA ITY?
Vao feno fitarainana ny mpamily kamiao fa tena potika tanteraka ny RN2 mampitohy an'Antananarivo amin'i Toamasina. Nilaza ho tsy manambola amin'izany fanjakana. Nitokona ny mpamily tao Toamasina ary tamin'ny alalan'ny etona mandatsa-dranomaso mihitsy no nandravana izany hetsika izany. Nilaza ny hanao fanamboarana ihany ny fanjakana avy eo.
Inona no hitako ao anatin'izany?
Nihodina ny tantara. Rehefa vita ny Lalampirenena faharoa dia nihabetsaka ireo fiara nifamezivezy taminy. Talohan'ny fahavitany manko dia ny lalamby sy ny sidina fiaramanidina ihany no nahafahana nampitohy ireo tantara roa ireo. Tamin'izany fotoana izany, raha nangataka ny hampitomboana ny isan'ny zotra ny olontsotra dia nolazaina fa efa mandeha fatiantoka ny lalamby. Gaga tanteraka ny amin'izany ny olona.
Avy eo, niditra repoblika fahatelo isika. Gaga izay naharaka fa hoe natsahatra ny fifanarahana tamin'ny RNCFM (Lalamby) amin'ny fitaterana entana fa ny orinasa Sodiat indray no mitatitra ny solika ho eto an-drenivohitra. Tamin'io fotoana io no nahapotika tanteraka ny lalamby ka tsy nahatafarina azy mandraka androany.
Amin'izao fotoana izao, manana ampahambola (raha tsy hoe tompony) amin'ny Madarail nisolo ny RNCFM ny tompon'ny Sodiat (raha tsy ny Sodiat). Raha potika ny lalampirenena faharoa dia vahaolana hafa ny Madarail. Ho lasa ampihimamba indray ny fitaterana ny entana eo amin'ny tanàna anankiroa... tsy ampihimamban'ny fanjakana toy ny teo aloha fa ampihimamban'ny tsy miankina ka ho ataony amin'izay itiavany azy ny sara amin'izany. Vao lasa tamin'izany ny saiko kanefa tsy nety nanoratra izay tao an'eritreritro tamin'ity zavatra ity aho no nipoaka ilay zava-tsy nisy niteraka zavatra maro.